अपराधका घटनामा न्यूनीकरण भएको छ - प्रहरी महानिरिक्षक - तितोपाटी
अपराधका घटनामा न्यूनीकरण भएको छ – प्रहरी महानिरिक्षक
तितोपाटी – प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देशमा अपराधका घटनामा कमी आएको र नेपाल प्रहरी मजबुत हुँदै गएको बताएका छन् । समाजमा हुने बलात्कार लगायतका केसलाई लिएर प्रहरीमाथि दोष लगाउन नमिल्ने खनालको तर्क छ । कुनै व्यक्ति दोषी हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने बताउँदै महानिरीक्षक खनालले भने ‘बाहिरकाले यो हैन, यो हो भन्न मिल्ला त ?’ कञ्चनपुर घटनाको प्रशंगमा कुरा गर्दा आइजीपी खनालले मानसिक रोगीले कुनै अपराध गर्न सक्दैन भनेर अनुमान लगाउन नमिल्ने बताए । ‘प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानहरुमा लापरवाही विल्कुलै भएको छैन’, आईजीपी खनालले भने, ‘अहिले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा शंकास्पद मान्छेको स्टेटमेन्ट नै लिइएन भने कोसँग जाने त ?’ आइजीपी खनालले एआईजीहरुको बढुवामा ढिलाइ नभएको बताए । उनले कुनै पनि प्रहरीको प्रमोशन नेतालाई भेटेका आधारमा नभएर उसको कार्यक्षमताका आधारमा गरिने बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगको अन्तर्वार्ताः
प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानहरुमा लापरवाही विल्कुलै भएको छैन । कसैले गर्न जरुरी पनि छैन । अहिले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा कसैलाई आएका सबुद प्रमाणका आधारमा हेर्दै गरेर जाने हो । कोही मान्छे शंकास्पद छ र स्टेट्मेन्ट नै लिइएन भने कोसँग जाने त ? स्टेटमेन्टका आधारहरु पनि भेरिभाई गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो अपराधी होइन, यो चाहिँ हो भन्न त अरुको कसरी अधिकार होला र फेरि ? बाहिरकाले यो हैन, यो हो भन्न मिल्ला त ?
कुनै प्रहरीले कहीँकतै गडबडी गरेको भए स्पष्टरुपमा ठाउँको ठाउँ कारवाही हुन्छ । यसमा नेपाल प्रहरी संगठनको कमजोरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
कतिपय अपराधीहरु कस्ता हुन्छन् भने दुनियाँका अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्ता धेरै केसहरु रहेका हुन्छन् । एकैचोटि सबै खुल्दैनन्, कतिपय कम्प्लेक्स पनि हुन्छ कतिपय कुराहरु । जम्मा दुईजना हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटाले होइन भनेपछि अर्को को हो त ? हो कि हैन भन्नेकुरा आजकल यातना दिएर गर्न हुन्न । टाइम कुर्नैपर्छ ।
यस्ता घटनाहरु पहिले पनि भएका छन् । कतिपय केसहरु १२/१४ वर्षपछि पत्ता लागेका केसहरु पनि छन् । कति त्यत्तिकै होलान् । तपाईले अमेरिकामा पनि देखिरहनुभएको छ नि । हिजोमात्रै त्यत्रो फायरिङ भयो अमेरिकामा ।
अहिले म कुनै घटना भएको देख्दिनँ । यो भन्दा हुन्छ ।
अहिले यस्ता घटनामा कहीँ पनि मिलापत्र हुँदैन । उजुरी दर्ता गरेर जानुपर्छ भन्ने कडा म्यासेज हामीले दिएका छौं । त्यो म्यासेज अनुसार मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ ।
अस्ति दुई/तीनपटक नेपाल बन्द गरे, कहाँ सफल भयो ? यो त प्रहरीकै हो नि त । कसले आएर गरेको हो ? मैले नै गरेको हो त भन्दिनँ तर सर्वेन्द्रको नेतृत्व आएपछि भएको हो त भन्न पाइयो होला नि । काम गरेकोमा जस पनि त दिनुपर्‍यो नि ।
कतिपय भेटहरु बोलाएर गरिएका होलान् । मैले सिधै गृहमन्त्रीकहाँ नजानोस् भन्नु भन्दा पनि आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नोस्, त्यसैका आधारमा मूल्यांकन हुन्छ भनेको छु ।
दरबन्दी कति राख्ने भन्ने सुरुमा आएन । दरबन्दी आइसकेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कुर्नै पर्ने थियो । त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।
यो भन्दा पहिलेका बढुवाहरु धेरै रोकिएका थिए । तलका इन्स्पेक्टर, डीएसपीका सबै रोकिएका थिए ।
एआइजी त १६/१७ जना पहिल्यै भएका थिए । कति एआइजी राख्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । कति एआइजी राख्ने भन्ने सरकारबाट निर्क्याैल भएर आइसकेपछि कार्यसम्पादनको समय कुर्ने क्रममा एकाध महिना लागेको हो । यो बाहेक ढिलो भएको छैन ।
योभन्दा पहिलेका आइजी साहेबहरुका पालामा त ७/८ महिनासम्म एआइजीको बढुवा रोकिएका थिए । खाली, अहिले हामीलाई देखाएर मात्रै पनि त भएन नि । पहिले बिग्रिएका बेथितिहरुलाई हामीले अहिले थितिमा ल्याउनुपरेको छ ।
साभार – अनलाइनखबर
August 28, 2018 3:35 pm | अन्तर्वार्ता